Hexagonal Waya Netting Factory - China Hexagonal Waya Netting Manufacturers, Suppliers
Okuko Netting Hot tinye kpaliri maka Chicken Runs
A makwa Hex Netting dika Waya okuko (ma obu okuko okuko ma obu okuko ulo) E wezụga iji ya maka ngere ma ọ bụ ihe eji eme ihe, ọ dịkwa mma maka ahịhịa na ọrụ ubi, na ọrụ ụlọ ndị ọzọ.
Itienna Na Enclousers Chicken Coops Chicken Waya Netting
Net Net Net, a ụdị nke mezie hexagonal ntupu, nwere kpọmkwem Njirimara adabara iji na-ewu. Ọ bụ ihe zuru ezu maka mkpuchi ọkụkọ & ngịga mkpụrụ osisi, ma dịkwa mfe ịkpụzi na ịkpụzi. A na-ejikarị ya eme ogige anụ ọkụkọ, dị ka ọkụkọ.
Hexagonal Steel Stucco Waya Netting Onwe-Iwe
Emepụtara na tupu ọkụ itinye galvanized waya ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara dị ka EU ụkpụrụ, Nke a mkpuchi ihe net etinyere nkume ajị anụ ma ọ bụ iko ajị anụ maka wired ute.
Ogige Hexagonal Chicken Waya Netting Electro kpaliri 40mm
Hexagonal waya nettingsemepụta akara dị elu nke waya waya carbon dị ala, nke a na-ejikarị kpoo ma ọ bụ plastik dị ogologo ndụ. Ntupu ahụ siri ike na nhazi ma nwee ihu elu. A na-ejikarị ụgbụ waya waya nke hexagonal eme ihe nke ukwuu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ugbo. Ọzọkwa ya ga-eji dị ka nsu maka ulo ozuzu okuko onu, ịkụ azụ, ubi, ụmụ ama egwuregwu na Christmas decorations.
Lobster Afia Hexagonal Plastic ntekwasa Chicken Waya Netting
A na-eji eriri wiwi hebagonal hebagonal, wiwi Plastic Chicken na ogologo oge na-adịgide adịgide, site na netwọkụ waya GAW hex, wee gaa bat nke batrị, mee akwa mkpuchi PVC. Mmiri na anwụ na-eguzogide ọgwụ.
Ego Economy Waya ntupu maka immụ anụmanụ
Chicken waya mee nke galvanized waya, green green ịkwanyere ntekwasa waya, igwe anaghị agba nchara waya nwere hexagonal meshes. Ọ bara uru maka imechi ụdị anụmanụ dị iche iche, dịka nurseries, brooding, chicken, bantam, okuko, peacock, pig, pheasant, boars, na capybara. A na-erekarị na mpịakọta 30m, 50m ma ọ bụ 100m ogologo na elu dị elu.
Cokwanyere ntekwasa Chicken Waya Garden Waya Netting
A na-eji waya ọkụkọ kọfị eme ihe n’ubi ma ọ bụ n’ugbo. The isi waya bụ kpaliri waya nke nwere ụdị abụọ nke electro waya na-ekpo ọkụ tinye waya.The echebe PVC mkpuchi na-eme ka ọkụkọ waya adịru ọtụtụ afọ ogologo karịa uncoated ọkụkọ waya. Agba nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwa na odo.
3600m kpaliri Nrụgide oru Chicken Waya 25mm
Emeputa ya tupu ekpo ọkụ itinye galvanized waya ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara dịka ụkpụrụ EU si dị, ọ dị ogologo mita 3600m na-eme ka ọ gaa n'ihu n'elu ụlọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ. Ihe mkpuchi a na-etinye na ajị ajị anụ ma ọ bụ ajị ajị anụ maka wired a na-adọ adọ.
Hexagonal Chicken Waya fencing Animal Nchedo 31mm
Animal Protection Chicken Waya Netting 25mm Hot Itinye kpaliri
Chicken Waya Netting bụ ike na mgbanwe, ezigbo maka ulo ozuzu okuko, ọkụkọ coops, osisi nchedo na gardentrellising. A na-eme ya site na waya nchara na-ekpo ọkụ maka ike na nchebe ọzọ site na ihu igwe.
Hexagonal Chicken Waya Netting 40mm Hot Itinye kpaliri Europe
Ọkụkọ waya ntupu, a ụdị nke mezie hexagonal ntupu, nwere kpọmkwem Njirimara adabara iji na-ewu. Ọ bụ vasatail maka ọkụkọ Herọd & mkpụrụ ngịga, na mfe udi na ebu. A na-eji ya n'ime ogige maka obere nnụnụ, ma ọ bụ dị ka anụ ọkụkọ ma ọ bụ obere ụlọ obibi.Ọ na-ejikwa ya n'akụkụ akụkụ ubi.
Ọrụ Ugbo Ala Ọrụ Chicken Waya nke Paleti Na-akwakọba
Anyị na-akpọ Chicken waya okuko netting ma ọ bụ hexagonal waya netting. A na-ejikarị ya echebe ọka na ọka wit.Hexagonal waya nettingsemepụta akara dị elu nke waya waya carbon dị ala, nke a na-ejikarị kpoo ma ọ bụ plastik dị ogologo ndụ. Ntupu ahụ siri ike na nhazi ma nwee ihu elu. A na-ejikarị ụgbụ waya waya nke hexagonal eme ihe nke ukwuu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ugbo.
123456 Osote> >> Peeji nke 1/7